Eyona ndawo ivaliweyo-yeAluminiyam yeGwebu yoMvelisi kunye neFektri | Beihai
IAluminiyam Foam luhlobo olutsha lwezixhobo zokusebenza ezakhiweyo ezineempawu ezintle. Ngokwesakhiwo sepore, igwebu lealuminium lingahlulahlulwa libe ligwebu le-aluminium evaliweyo kunye ne-foam evulekileyo yeseli yealuminium, indawo yangaphambili nganye ayixhunyiwe; umngxuma wokugqibela odityaniswe.
Iphaneli evaliweyo yeseli yeAluminiyam
Ngaphezulu kwe-97% iAluminiyam
Ukutsalwa kwe-Acoustic Coefficient
Imilinganiselo. 780 ℃
Amaza ombane okhusela amandla
Njengoko iimveliso ze-Aluminium Foam ezinobunzima bokukhanya, ukufunxwa kwesandi esiphezulu, ukufunxeka okuphezulu kwamandla, ukusebenza ngamandla kwe-electromagnetic shielding, ukufudumeza ubushushu ngokugqwesileyo, ubushushu obuphezulu, ukumelana nomlilo, ngobuhlobo obungqonge ubume bendalo kunye nezinye iipropathi ezizodwa.
Iphepha leDatha yokuSebenza koMatshini
Amandla aXineneyo (MPA)
Ukufunxa amandla (KJ / M3)
I-3.0 ~ 4.0
Ngama-7000 ~ 9000
(1) Ubunjineli kunye noShishino loKwakha
Iiphaneli zealuminium amagwebu anokusetyenziswa njengezinto zokungenisa izandi kwiitonela zikaloliwe, phantsi kweebhulorho zohola wendlela okanye ngaphakathi / ngaphandle kwezakhiwo ngenxa yokugquma kwe-acoustic.
(2) I-Automotive, Aviation kunye ne-Railway Industry
Amagwebu eAluminiyam anokusetyenziswa kwizithuthi ukwandisa ukuthoba isandi, ukunciphisa ubunzima bemoto, kunye nokunyusa ukufunxeka kwamandla kwimeko yengozi.
(3) Icandelo loYilo kunye noShishino
Iiphaneli zealuminium amagwebu anokusetyenziswa njengeepaneli zokuhombisa eludongeni nakwisilingi, enika imbonakalo eyodwa enebukhaphukhaphu bentsimbi.
Zilula, zikhuselekile kwaye zilula ukuyifaka ngaphandle kwezixhobo zokuphakamisa oomatshini. Kukulungele ukusebenza kwiindawo eziphakamileyo, umzekelo iisilingi, iindonga nophahla.
Egqithileyo Iphaneli yeSandwich yeAluminiyam
Okulandelayo: I-AFP eneemingxunya ezibiweyo